Maddi waldhabbii daangaa sirriitti qoratamuu qaba
Maddi waldhabbii daangaa sirriitti qoratamuu qaba Featured
Ummatni Oromoofi Sumaalee Itoophiyaa baroota dheeraaf waljaalalaan kan waliin jiraateedha. Waliin bultii dhaabbatee walirraa horeera. Aadaafi afaan daran walitti dhiyaatu qaba.
Waanti nama dhibu ummattoonni lameenuu hortee ummata Kuushidha. Egaa ummattoonni lameen naannawa daangaatti laga tokko waliin dhugaa beeylada waliin obbaafachaa turan.
Darbee darbee wayita margiifi bishaan haphatu waliin fayyadamuurratti walitti bu’iinsonni muraasni uumamaa turaniiru. Kun ammoo kan nama ajaa’ibsiisu miti; miilli keenya kaayyoo tokkoof hiriireyyuu walitti bu’a waan ta’eef.
Kan baranaa garuu hangaanis ta’e amalaan daran guddaadha. Nama irraa fagaatee jiru miti ummattoota baroota dheeraaf waliin jiraataa turan kanneeniifuu hiibboo ta’uu yaadasaanii karaa miidiyaalee gara garaa ibsaa turaniiru.
Kanneen walitti bu’iinsa kana keessatti hirmaatan namoota kaleessa waliin jiraatan caalaa namoota naannawa sanaaf haaraa ta’aniifi meeshaa waraanaa ammayyaawoo hidhataniidha.
Akka namootni tokko tokko dubbatanitti namootni walitti bu’iinsicha daran hammeessan waraana humna addaa “Liyyuu poolisii’’ turan. Ajaja eenyuutiin akka hirmaataniifi dhugummaansa qoratamaa jira.
Sababa walitti bu’iinsa kanaan haala takkaa ta’ee hinbeekneen lubbuun namootaa darbeera, qabeenyi hedduun barbadaa’eera, namootni kumoota dhibbaan lakkaa’aman qe’eefi qabeenya ofiirraa buqqa’aniiru.
Bulchitoonni naannolee lameenis ta’e mootummaan federaalaa madda walitti bu’iinsa kanaa sirriitti qoratanii wanti ifa taasisan hinjiru. Akkasumas “qaamota tokko tokkoon,’’ jechuurra kan darbe eenyu walitti bu’iinsa kana akka hoogganes wanti hubatame hinjiru.
Garuu hojiin mataa mul’isuu ammoo eegalamuunsaa dagatamuu hinqabu. Ministirri Muummee Hayilamaaram Dassaalanyi tibbana wayita haasawa baniinsa hojii paarlamaa bara kanaarratti pirezidaantii biyyattii, Doktar Mulaatuu Tashoomaan dhiyaatee turerratti ibsa kennanitti sassaabdonni kiraafi kontiroobaandistoonni walitti bu’iinsa kana hammeessuu dubbataniiru.
Akka isaan jedhanitti, olaantummaa daldala jimaafi kontiroobaandii to’achuuf ifaajni taasifamaa jiru olaanaa waan ta’eef furmaata siyaasaa akka fedhus hubachiisaniiru. Kun ammoo madda waldhabbii ta’uun ummattoota naannawa daangaa jiraatan gaaga’eera. Ta’u jala muranii eenyu gaaga’ama guddaa akka dhaqqabsiiseefi ka’umsa madda wal dhabbii akka ta’e waanti dubbatan hinturre.
Pirezidaantiin Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa, Obbo Lammaa Magarsaa ibsa OBNf kennaniin dhimma kana qeeqaniiru. Keessumaa, sababa daldalli seeraan alaa naannawa daangaatti finiineen meeshaaleen waraanaa garmalee ummata harka galuunsaa gaaga’ama uumame daran hammeesseera jedhan.
Hundaa ol garuu akka walitti bu’iinsi kun dhaabbatuuf osoo akeekkachiisni mootummaa federaalaatiin kennamee jiruu rakkoon kun ammayyuu darbee darbee mudachaa jiraachuun kabaja olaantummaa seeraatiif jiru xiqqeessuunsaa hinoolu.
Sirna federaaliizimii ummattoonni biyyattii waliin hundeessan jalatti qe’ee ofiirraa walbuqqisuun qajeelfama federaalaa fudhachuu dhiisuun sirnicha gaaffii keessa kan galchu ta’a.
Erga maddi walitti bu’iinsa kanaa sababa daangaa hintaanee akkasumas ummattoonni lameen waliin jiraachuuf fedhii guddaa qabaatanii waldhabbii kana guutummaatti dhaabuun maaf dadhabame? Qaama jeequmsa kana finiinsaa tures seeratti dhiyeessuun maaf harkifate? Hundaafuu furmaatni hatattaamaa kennamuu baannaan dhiibbaan dinagdee, hawaasummaafi siyaasaa uumamu salphaatti kan tilmaamamu miti.
Walumaagalatti, sababootni waldhabbii sababa daangaatiin uumame kanaa ammayyuu gad fageenyaan qoratamee furmaatni waaraan kennamuu qaba. Qaamotni gocha kanarratti hirmaatanis seeratti dhiyaachuu qabu.
Torban kana/This_Week 43234
Guyyaa mara/All_Days 1468014